Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 13/06/2018
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 13/06/2018
Myanmar Border Police and Bangladesh Border Police forces conducted conducted coordinated ground patrol from border posts 41 to 42 on 27 May, from border posts 42 to 43 and from border posts 31 to 34 on 10 June, and from border posts 43 to 44 on 11 June.
A total of 40 coordinated ground patrols were conducted. The coordinated ground patrols were conducted 14 times in February, seven times in March, 16 times in May and three times in June. A coordinated naval patrol along the Naf River was also conducted four times.
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း၍ လှည့်ကင်းများဆောင်ရွက်
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် မေလ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁နာရီ ၅၅ မိနစ် မှ မွန်းလွဲ ၁နာရီ အထိ နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၄၁ မှ ၄၂ အထိ လည်းကောင်း၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲမှ မွန်းလွဲ ၂နာရီ မိနစ် ၅၀ အထိ နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၄၂ မှ ၄၃ အထိလည်းကောင်း၊ နံနက် ၉ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ မိနစ် ၅၀ အထိ နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၃၁ မှ ၃၄ အထိလည်းကောင်း၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅မိနစ် မှ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၂၅ မိနစ် အထိ နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၄၃ မှ ၄၄ အထိ လည်းကောင်း မြေပြင်လှည့်ကင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်တွင် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းချက်အရ Coordinated Patrol ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ တွင် ၁၄ ကြိမ်၊ မတ်လတွင် ၇ ကြိမ် ၊မေလတွင် ၁၆ ကြိမ်၊ ဇွန်လတွင် ၃ကြိမ် စုစုပေါင်း ( ၄၀ )ကြိမ် နှင့် ရေကြောင်း ကင်းလှည့်ခြင်းကိုလည်း နတ်မြစ်ကြောင်းအတိုင်း စုစုပေါင်း (၄)ကြိမ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။